ပြည်သူ့အဘို့အနယူးတံခါးပေါက်ဖွင့်လှစ်သည် Microsoft-LinkedIn တို့ဝယ်ယူ
8 ဒီဇင်ဘာ 2016
ကမ္ဘာအဝှမ်းမှတစ်ဦးချင်းစီအသစ်ဗိမာန်ဖွင့်လှစ် controller များရှင်းလင်း Microsoft က LinkedIn တို့ရှာမှီး,
ဒါဟာသူတို့မိုက်ကရိုဆော့ဖ LinkedIn တို့ရယူမယ်လို့ကြေညာကြောင်း, ဇွန်လ 13 ပေါ်, ခြောက်လပတ်ပတ်လည်ကြိုတင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပတ်ပတ်လည်ထို့နောက်သူတို့နှစ်ကျော်ကရှေ့တော်၌ထိုညှိနှိုင်းမှုအခြေချရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ယနေ့ဥရောပကော်မရှင်ကလုံလုံခြုံခြုံရှင်းလင်းတော်မူကြောင်းကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့အခုရယူပြီးစီးရန်မျှော်လင့်အုပ်ချုပ်ရေးထောက်ခံချက်များအများစုဆည်းပူးကြနှင့်အစီအစဉ်လာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ပိတျထားပါလိမ့်မယ်။
ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ထောက်ခံချက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, တောင်အာဖရိက, ကနေဒါ, ဘရာဇီးနှင့်တောင်အာဖရိကကိုနှိုင်းယှဉ်စာရင်းစစ်များနှင့်ရှင်းလင်းရေးပြီးနောက်ကြာပါသည်။ မြိုးမြိုးတို့တှငျနှင့်အမျိုးမျိုးသောအခြားသူတွေအတွက်, သူတို့ကကျယ်ပြန့်အသေးစိတ်အတွက်အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် controller စနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရောနှောလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။
ဥရောပကော်မရှင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စာမေးပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သူတို့အပြင်ကျွမ်းကျင်သူရှည်လျားသောအကွာအဝေးအလွတ်သဘောဆက်သွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးများအတွက် Microsoft ရဲ့ထောက်ခံမှုပတ်သတ်ပြီးအနည်းငယ်တာဝန်များကိုတရားဝင်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ကအောက်ပါငါးနှစ်ကြောင်းအပ်နှင်းပါပြီ:
သူတို့ကအပြင်လူကျွမ်းကျင်သူလူ့အပြန်အလှန်အုပ်ချုပ်ရေးမှလက်လှမ်းသူတို့ရဲ့ရုံး Add-အတွက်အစီအစဉ်ကိုအောင်အပေါ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရုံး Add-အတွက်အစီအစဉ်ကို client များရုံးအသုံးချဖို့တစ်ခုတိုးတက်လာသောပေးနေတာပေးခြင်း, Microsoft Outlook, Word, PowerPoint နဲ့ Excel သို့မိမိတို့၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုသြဒိနိတ်မှဒီဇိုင်နာများအာဏာ။ သူတို့ကဒီအစီအစဉ်ကိုတိုးတက်အောင်အပေါ်စောင့်ရှောက်အဖြစ်ဤအဆင့်မြှင့်အပြင်ကျွမ်းကျင်သူလူ့အပြန်အလှန်အုပ်ချုပ်ရေးမှလက်လှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
သူတို့ကအပြင်လူကျွမ်းကျင်သူဖို့လက်လှမ်းရုံး Store မှာကန့်သတ်အချိန်အဖွင့်တာရှည်အကွာအဝေးလူ့ဆက်သွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအောင်အပေါ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ကအိုင်တီအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့် client များနောက်ပိုင်းတွင်အပေါ်ညှိနှိုင်းစေခြင်းငှါ၎င်း UI ကိုပု LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းနဲ့ action ကိုဒေတာအတွက်ပြသနိုင်ဖို့ရှိမရှိကောက်နေသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုံးတှေ့ဆုံ tweaks နိုင်သည်ကိုအာမခံပါလိမ့်မယ်။
သူတို့တစ်တွေ LinkedIn တို့လျှောက်လွှာသို့မဟုတ် Windows PC များများအတွက် tile ကိုဆောနဲ့ Windows ထဲမှာထည့်သွင်းသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သူတို့ကဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာ, ဒါမှမဟုတ်နှင့်ဓနသဟာယ၌မိမိတို့မှာ Windows PC များပေါ်တွင်သူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့မကောက်ဖို့ကို PC ထုတ်လုပ်သူများခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့က client များသူတို့ဆန္ဒရှိသောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်လျှောက်လွှာများနှင့် tile ကို uninstall လုပ်လိုက်နိုင်သည်ကိုအာမခံပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာဒါ့အပြင်က Windows အတွက် Store မှာသုံးစွဲနိုင်နေဖို့နိုင်ပြီးမတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ချီတက်ရမည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းတစ် LinkedIn တို့လျှောက်လွှာမိတ်ဆက် clients များကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါ Windows ကိုသူ့ဟာသူအသုံးချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Microsoft က LinkedIn တို့သဘောတူညီမှုရ
ယင်းနှင့်ဓနသဟာယထဲမှာသူတို့တစ်အထက်တန်းလွှာအဓိကအကြောင်းရင်းအပေါ်နှင့်ဤလိုင်းများလူတစ်ဆက်သွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှတတ်ကျွမ်းသူတစ်ဦးပွို၏အရပ်ရပ်တို့၌ကွဲပြားကနျ့တလျှောက် LinkedIn တို့ကိုထောကျပံ့မယ်လို့တစ်ဦးကို Windows LinkedIn တို့ application သို့မဟုတ် tile ကို၏ Pre-တည်ထောင်ဘို့ကို PC ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းသို့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ကွယ်ကဒီစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူသူတို့နှစ်ဦးကိုကြောက်မက်ဘွယ်အဖွဲ့အစည်းများစည်းလုံးနိုင်ပြီးလာမယ့်အရာကိုသိသိသာသာပိုပြီးကျယ်ပြန့်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ယခင်ခြောက်လ၏အခါသမယမသာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းကိုလုပ်ပေမယ့်သူတို့နှင့်အတူဆက်နွယ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအစား, ပိုပြီးမရှိမဖြစ်။
ဇွန်လ, Satya Nadella နှင့်ဂျက်ဖ် weiner မှာတော့ Microsoft နှင့် LinkedIn တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, ကမ္ဘာ့ကားမောင်းကျွမ်းကျင်သည့်စနစ်နှင့်အတူကမ္ဘာ့ကားမောင်းတတ်ကျွမ်းသောမိုဃ်းတိမ်ကိုစုစည်းဘို့မိမိတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရူပါရုံကိုအစီရင်ခံထားသည်။ သူတို့ကဒီရောနှောကြေညာမှသာလျှင်တဆယ်ရက်အကြာမှာ, United Kingdom ထဲမှာမဲဆန္ဒရှင်ဥရောပသမဂ္ဂထားခဲ့ဖို့မဲပေးကြသည်။ ပိုပြီးင်ဘယ်အရာကိုခန့်ငါးလအတွင်းသောနောက်, United States မှာတစ်ထောင်လွှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြိုင်ပွဲဘာသာရေးစစျပှဲအချို့နိဂုံးချုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတ္တလန္တိတ်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပြုလုပ်အများအပြားတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အဆိုပါမြင့်တက်ကွန်ပျူတာစီးပွားရေးကိုဖွငျ့အဖွင့်၌မဆက်ဆံနှင့်နိုင် left နှင့်မအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြောင်းတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားဖြစ်ထွက်လှည့်လိုက်ပါတယ်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု apparatuses လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲများအတွက် panacea မဟုတ်နေစဉ်, သူတို့အနေနဲ့အလွန်အရေးကြီးသည်ကတိကဝတ်စေနိုင်သည်ခိုလှုံပါ၏။ Microsoft နှင့် LinkedIn တို့အတူတကွဖန်တီးဆည်းပူးအသစ်များကိုကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များအတွက်အရည်အချင်းများ, အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အသစ်အလုပ်အကိုင်ရှာ, သူတို့သည်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်အဖြစ်ကိုပိုမိုဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းဖြစ်ထွက် turn အွန်လိုင်းတစ်ဦးချင်းစီမှတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သူတို့အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြင်ဆင်နေအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်စင်တာအရည်အချင်းများနှင့်အတူဖော်ထုတ်သစ်ကိုတွေ့ဆုံ, ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အရည်အချင်းများပြီးနောက်ရှာကြံများစွာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူသူတို့အားအစေခံဖို့ပိုပွီးမွောကျနိုငျပါနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနှောင်းပိုင်းတွင်ငွေကြေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စားသုံးကွမဟုတ်ကြသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုမိုပွင့်လင်းတံခါးကိုအောင်သူတို့ရဲ့စိတျအပိုငျးလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft နှင့် LinkedIn တို့၏ရောနှောနှင့်အတူ, သူတို့ပါဝင်သည်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုသင်ယူနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်ရှာတစ်ဦးချင်းစီမှတစ်လမ်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Microsoft ကပရဟိတမှတဆင့်သူတို့ကျောင်းများမှအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်သိရှိစေရန်သမျှသည်အခြားအဖွဲ့အစည်းကထက်ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့စျေးသက်သာ Access ကိုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အသစ်ဝေးလံသောဘရော့ဘန်း "ရုပ်မြင်သံကြား white space" တီထွင်မှုမှတဆင့်သူတို့ကပိုတောအုပျစုမှ broadband access ကိုဖျောပွပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, အ LinkedIn တို့စီးပွားရေးဇုန်ဇယားအတူအနီးအနားသိမ်းပိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စွမ်းရည်လိုအပ်ချက်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအစိုးရများသစ်ကိုဖွင့်လှစ်တံခါးများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပေါင်းသင်းဘဏ္ဍာရေးတိုးစနစ်များကိုဆည်းကပ်ပိုကောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်ယုတ္တိစွမ်းရည်အသုံးချကိုကူညီတခုတိုးချဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။
သူတို့ကချက်ချင်းယနေ့ကမ္ဘာကြီးအထိမတ်တပ်ရပ်သောမြောက်မြားစွာဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲများနားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်မတစ်ခုတည်းအဖွဲ့အစည်းကလုပ်နိုင်တဲ့ခါနီးကြောင်းရိပ်မိရ။ ဘာပဲအခြားထက်ဒီတစ်ခါလည်းပိုအစိုးရများချဉ်းကပ်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်အလုပ်, ညွှန်ကြားချက်များကျယ်ပြန့်စပျစ်သီးပြွတ်ကျော်တီထွင်ဆန်းသစ်အပေါ်စောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပွင့်လင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုကျော်တစ်ခုလုံးအဖြစ်သူတို့တက်ဖြည့်ဆည်းသင့် shared တာဝန်တစ်ခုခံစားမှုနှင့်အတူပြုမူ။
သို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်း - - အဘယ်အလုပ်ကိုမျှချို့တဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌။
Microsoft နှင့် LinkedIn တို့စည်းလုံးဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်. ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအစိုးရများနှင့်အတူ nitty gritty ဆွေးနွေးမှုများပြီးဆုံးဘဲလျက်, သူတို့ကိုစတင်ရန်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်နေတာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။